Firefox 68, diki huru kuburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Kutevera yakatarwa nzira, Mozilla yaburitsa Firefox 68 nhasi. Ichi chiitiko chikuru, kana zvichifanira kudaro kana uchichinja nhamba yekutanga, asi chokwadi chakasiyana. Inosanganisira mashoma akakosha maficha maficha, pakati payo andinonongedza kuti WebRender ichavhurwa pane mamwe madhivhisi. Asi chokwadi ndechekuti iyi yakasarudzika ichave yakakosha chete kune "diki" boka revashandisi, avo vanoshandisa Windows inoshanda sisitimu ine AMD kadhi yemifananidzo.
Pakati pezvinhu zvitsva zveFirefox 68, izvo zvatino tsanangura zvakadzama mushure mekucheka, isu zvakare tine AwesomeBar yakanyorwa zvekare kuti iwedzere kuvimbika uye ipe kuita kuri nani, asi shanduko dzinoonekwa kwazviri haisati yasvika pane iyi vhezheni. Iwo magadzirirwo ane runyerekupe rwekuti ave akagadzirira, asi Mozilla haisati yatora yakanakisa uye nekuipurudzira kuitira kuti iwedzere iyo Firefox 69 kana chero kuburitswa mune ramangwana.
Chii Chitsva muFirefox 68
Tsigiro yekuwana iyo account yeFirefox kubva kune hamburger menyu (iyo mitsara mitatu yakatwasuka).
Shandisa yakazara peji yemavara kusiyanisa odhita anokwanisa kudoma zvinhu zvese pawebhu peji izvo zvinokundikana nemavara macheki macheki.
Yakagoneswa WebRender yeWindows 10 vashandisi vane AMD mifananidzo makadhi
Nyowani yekuwedzera chirongwa chekukurudzira.
Mutsva keyboard mapfupi eWindows 10.
Kugona kuona tabo dzehumwe kuiswa kweFirefox kwakabatana neakafanana Firefox account (pasina kupinda iyo "%" chiratidzo).
Kwakabviswa dzimwe shanduro dzisina kuvakwa.
La AwesomeBar yakanyorwa zvekare kugadzirisa mashandiro uye mashandiro ayo.
Mhando nyowani yerima mumaonero evaverengi.
Chinhu chitsva chakawedzerwa kuzivisa kuchengetedzeka uye nyaya dzekuita pamwe nekuwedzeredzwa uye madingindira mune nezve: addons.
Iyo yekuwedzera dashibhodhi mune nezve: maAddons akagadzirwazve kuti ape yakareruka kuwana kune ruzivo nezve ekuwedzera.
Kudzivirirwa pakucherwa kwekrispto uye kudhinda kwemunwe kwakawedzerwa kune akaomeswa zvemukati anovharira marongero mune zvakavanzika uye zvido zvekuchengetedza.
Yakagadziridzwa kurodha rutsigiro rweWindows BITS (Windows Background Intelligent Transfer), ichibvumira Firefox kuti ivandudze kurodha pasi kuti kuenderere mberi kana bhurawuza ravharwa.
Mafaera emunharaunda haachakwanise kuwana mamwe mafaera mune dhairekitori imwechete.
Kana kukanganisa kweHTTPS kunokonzerwa neantivirus kukaonekwa, Firefox ichaedza kuigadzirisa yega.
Microphone uye kamera kuwana ikozvino inoda kubatana kweHTTPS.
Firefox 68 iri pano inowanikwa kurodha pasi kubva kune yepamutemo webhusaiti browser (pano mumitauro yakasiyana) yeLinux, macOS uye Windows. Vashandisi veLinux vane imwe sarudzo, yakanyanya kuwanda, inova zvinyorwa zvepamutemo, kwainozoonekwa chero nguva. Wakatokwanisa here kugadzirisa kuFirefox 68?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Mozilla Inoburitsa Firefox 68, Yakakura Kudiki Kuburitswa